कोरोना संक्रमणले सास फेर्न गाह्रो भयो ? अपनाउनुस् चिकित्सकका यी १६ सुझाव « News of Nepal
कोरोना संक्रमणले सास फेर्न गाह्रो भयो ? अपनाउनुस् चिकित्सकका यी १६ सुझाव
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले नेपालमा पनि भयावह स्थिति पैदा गर्न लागेको छ । यस समयमा सरकारले समेत बिरामीलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ । सरकारको यस्तो सूचनाले जनता झन बढि त्रसित देखिएकाबेला चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने संक्रमितलाई नआत्तिन र डटेर यस महामारीको सामना गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
अस्पतालमा बेड अभाव भएसँगै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा संक्रमितलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा डा.रबिन्द्र पाण्डेले केही सुझाव दिएका छन् ।
डा. पाण्डेका १६ सुझाव
२. पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला । यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ । पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँठानेर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नुहोला। यसले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ ।